बोझिलो यौन, बोझिलो सम्बन्ध · Aawaj Nepal
आवाज नेपाल, २०७५ मंसिर २० बिहीबार
काठमाण्डौँ । यौनप्रति हाम्रो विकृत सोंच छ । यौन भन्नसाथ त्यसलाई ‘छाडा’ भनेर नाक खुम्च्याउने प्रवृत्तिले यस सम्बन्धमा खुला बहस हुन सकिरहेको छैन । नतिजा, यौनकुण्ठा जस्ता मनोविकारले धेरैलाई ग्रस्त बनाइरहेको छ ।
यौन सम्बन्धमा जुन किसिमको मधुरता हुन्छ, त्यसले दम्पतीको सम्बन्धमा उर्जाको संचार हुन्छ । तर, यौन सम्बन्ध बोभिलो भयो भने उनीहरुको सम्बन्ध पनि फिका हुन पुग्छ । आखिर किन यौन सम्बन्ध बोझिलो हुन्छ ?यसका दोषी को ? श्रीमान् कि श्रीमती ? वा दुबै ?
अहिले जमाना बद्लिएको छ । मान्छेको दिनचर्या बद्लिएको छ । आधुनिक उपकरणसँग एकाकार हुँदै गएको मानव जीवनमा धैर्यताको कमी हुँदैछ । एक क्लिकमै संसारको सूचना पाउने आकंक्षा जस्तै हरेक कुरा छिटो–छरितो होस् भन्ने चाहन्छन् । भनौं, सबैलाई एक किसिमको हतारो छ ।
छिटो पढाई सक्ने, छिटो रोजगारी गर्ने, छिटो धन कमाउने, छिटो मान–प्रतिष्ठा आर्जन गर्ने । यो हतारो एक प्रवृत्तिको रुपमा विकास भएको छ । यसको साइड इफेक्ट मानिसको यौन जीवनमा पर्न थालेको छ । यौनमा पनि हतारो ! हो त, हामीलाई अहिले यौन सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने फुर्सद छैन । यौन सम्बन्ध क्षणभरमै बनाउने र क्षणभरमै त्यसबाट सन्तुष्ट प्राप्त गर्ने चाह बढेको छ ।
अर्कोतिर काम, करियर, पैसा आदिको चक्करमा मानिसहरु थाक्दै, गल्दै गएको छ । उनीहरुको मस्तिष्कमा केवल ‘कसरी कमाउने’, ‘कसरी सफल हुने’, ‘कसरी प्रगति गर्ने’ भन्ने कुरा मात्र घुम्न थालेको छ । यसरी उनीहरु यौनबाट क्रमस टाढिदै गएका छन् । आफ्नै शरीर र शरीरको आवश्यक्तालाई भुलेर सुख(सुविधा, उन्नती(प्रगति, मान(प्रतिष्ठा खोजिरहेका छन् । यसले उनीहरुको यौन जीवन क्रमस ओझेल पर्दै गएको छ ।
दिनभर दम्पती काममा व्यस्त हुन्छन् । दुबै आ(आफ्नै कमाई, धन्दामा लाग्छन् । दुबैलाई काम र करियरकै धुन हुन्छ । साँझ घर र्फकन्छन् । फेरी उनीहरु मोबाइल, टिभी वा सामाजिक सञ्जालमा भुलिन्छन् । आपसी सम्वाद हुँदैन । स्पर्श हुँदैन । शारीरिक सम्बन्धको कुरा छाडौं ।